ज्योति विकास बैंक र कैलाश विकास बैंकबीच रेमिट्यान्स सम्झौता
ARCHIVE, CORPORATE » ज्योति विकास बैंक र कैलाश विकास बैंकबीच रेमिट्यान्स सम्झौता
काठमाडौँ - ज्योति विकास बैंक लि. र कैलााश विकास बैंक लि. बिच रेमिट सेवा प्रदान गर्ने सम्झौता भएको छ । उक्त सम्झौतापत्रमा ज्योति विकास बैंक लिमिटेडको तर्फबाट प्रमूख कार्यकारी अधिकृत मनोज ज्ञवाली तथा कैलाश विकास बैंकका तर्फबाट प्रमूख कार्यकारी अधिकृत अमृत चरण श्रेष्ठले हस्ताक्षर गरे ।
ज्योति विकास बैँकले हालै संचालनमा ल्याएको ज्योति रेमिट सेवा कैलााश विकास बैंकका सम्पूर्ण शाखा कार्यालयहरुबाट रेमिटेन्स सेवा प्राप्त गर्न सकिने भएको छ । हाल ज्योति विकास बैँक को ६० वटा शाखा रहेका छन भने यस आर्थिक वर्ष भित्र थप ३० शाखा संचालनमा आउदैछन् ।